Posted by Taungoo at 9:44 PM
ပြောလဲ မပြောရဲ၊ ပြောလဲ မပြောအားပါဘူးကွာ။
မပြောရဲကြောင်းပါ။ မရောက်တာ ကြာတော့ အသံတောင် သိပ်မထွက်ရဲဘူးး)
လာလည်သွားတာ တွေ့ပါတယ်။ ကျေးဇူး။ ဇာတ်သိမ်း ရေးနေပြီ။ လာဖတ်ပြီး ဝေဖန်ချက်လေး ချီးမြှင့်ပါလေ။
အမ ကတော့ မြန်မာအစားအစာကြိုက်မှကြိုက်..
ဂျပန်စာ မlike ဟဟ..
အိမ်မှာ မြန်မာစာတွေပဲ များများချက်စားဖြစ်ပေမယ့်
သမီးလေးက မြန်မာဟင်းချက်ရင် မစားတတ်ဘူး။
မကြိုက်ဖူး ဖြစ်နေတယ်လေ။ သူတို့ကျောင်းမှာက နေ့
လည်စာ ဂျပန်စာကျွေးတော့ ဂျပန်စာကို ပိုကြိုက်နေတယ်.အမ အတွက်တော့ ဒွတ်ခပဲလေ..
အမ က ဂျပန်စာ မကြိုက်တော့ ဂျပန်စာသိတ်မချက်
မြန်မာစာပဲ ကြိုက်တယ်။း)
မြန်မာအစားအစာတွေက ဆီတွေ များလွန်းတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီပိတ်နိုင်တယ်။ အငံတွေ များလွန်းတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ မကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေပဲ ကြိုက်မိလို့ စားနေတာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီ။ ဒါကြောင့် သေရင်လည်း သေပါစေတော့။ အဟဲ...
ကျွန်တော်မျိုးကြီးလဲ မပြောရဲပါခင်ည။ စားကောင်းပါသည်ခင်ဗျ။ အရင်က clementi မှာ နေတုန်းက မဖွင့်သေးဘူးဗျ။ ခုတော့ ဝေးနေပေါ့။
အဲဒီဆိုင်က ကြက်သွန်ကြော်က နည်းနည်းကြီးနေတော့
အလည်မှာ မုန့်နှစ်တွေ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ ရှိနေသေးတာ
နောက်တာပါ..ကြက်သွန်ကြော် အကြီးကြီး စားလို့ကောင်းပါတယ်
စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးသားထားသောပိုစ့်
ကိုတောင်ငူရေ… အဲဒီဆိုင်လေးကို ဟိုနေ့ ကလာချောင်းသေးတယ်… အိမ်မှာစားခဲ့တာနဲ့ နောက်မှ စားမယ်ဆို ဆိုင်နေရာလေးမှတ်သွားတာ… ခုကိုတောင်ငူညွှန်းတော့ စားဖို့ သေချာသွားပြီ… သြော်…. ကိုတောင်ငူနဲ့ ကိုပုလုကွေး နာမည်ကြီး ဘလော့ဂ်ဂါ ၂ယောက်က အတူနေကြတာကိုး… bukit batok ဆိုတော့ ကျွန်မနဲ့ အနီးလေး… ဒါနဲ့ မြနန္ဒာကို အားပေးတယ်ပေါ့… ဆိုင်ပိုင်ရှင် အကိုကြီးက အီလက်ထရွန်နစ်မေဂျာကပဲလေ… ဟိဟိ… မေဂျာစွဲတွေ…
ဘလော့က နေ နုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ တော့ ပြောခဲ့ပါရစေ။
ဒိမှာရှိတဲ့ အမနဲ့သိခဲ့တဲ့ဂျပန်တရုပ်မလေးအင်ဒို ဖိလစ်ပိုင်လာအို အကုန်လုံး မြန်မာ့အစားအစာကိုကြိုက်ကြပါတယ်။
အမ သူငယ်ချင်းတွေဆို အမ ဘယ်အချိန်ထမင်းစားဖိတ်မလဲပဲ စောင့်နေကြပါတယ်။
အမရဲ့ ဂျပန်အမေတွေဆို ဆိုင်ဖွင့်ဖို့တောင်ဆွယ်ကြပါတယ်။
အမလဲ တချိန်ချိန် လိုင်းကြောင်နိုင်တယ်။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်လို့ ။ ဟဲဟဲ
နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ရေးတဲ့အခါ ပြန်လာခဲ့မယ်.
၆ ယောက်နေတဲ့ အခန်းမှာ...ကျောတစ်ခင်းစာလောက်မရှိတော့ဘူးလား...
နပါတ် ၇ လူ ဖြစ်ချင်တယ်..
ဟုတ်တယ် မပြောတာပဲ ကောင်းတယ် ကိုဇနိ
အဲဒါကြောင့် မမဝနေတာ။ ထထကနေပါ။
မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ။ ရဲရဲပြောလို့ရပါတယ် အမရယ်
အင်း.. ဟုတ်တယ်နော်အမ။ မီးမီးက ဂျပန်စာအမြဲစားနေရတော့ ဂျပန်စာပဲ ပိုကြိုက်နေမှာပေါ့။ အိမ်မှာ မြန်မာစာကို သူကြိုက်တာလေးတွေ ရွေးပြီး များများချက်ရင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်ပေါ့အမရဲ့။
ဆီများရင် အဆီလျှော့ အငန်များရင် အငန်လျှော့။ မြန်မာစာ စားတာတော့ မလျှော့နဲ့။ မြန်မာစာ စားပြီး အသက်ရာကျော်တွေ နေသွားတဲ့ မြန်မာဘိုးဘွားတွေ အများကြီး။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် ဥစ္စာကို ကံစောင့်တဲ့။ ချင့်ချိန်စားရင် အားဖြစ်ပါတယ် အမောင်ငယ်
လမ်းကြုံရင် ဝင်စားကြည့်ပေါ့အကိုရေ။ တခြားနေရာတွေလည်း ရှိသေးတယ်တဲ့။ ကျွန်တော် သိလာရင် ထပ်တင်ဦးမှာ။ အဟဲ
အမလည်း သွားစားဖူးတာကိုး။ ကောင်းပါလေလေ့။
ကျွန်တော်နဲ့ အဲဒီကောင်က ပထမနှစ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေပါ။ နာမည်ကြီးတော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ အမရယ်။ ထမင်းငတ်မှာ စိုးလို့ပါ။ အိမ်နီးရင် လာလည်မယ်အမ။ “လိပ်စာ”ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေး ပေးပါ။ သြော် အခုမှသိတယ်။ ဒါဆို ပိုအားပေးရမှာပေါ့။ မေဂျာစွဲ ကျောင်းစွဲကတော့ ကြီးတယ်အမရေ။ ဟဲ ဟဲ
နှုတ်ဆက်ပြီလားအမရယ်။ အပြီးတော့ မနှုတ်ဆက်ပါနဲ့။ အားတဲ့အခါ ပြန်လာပေါ့ဗျာ။ ဂျပန်မှာ ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားလိုက်နော်။ လာစားမယ်။
ကျွန်တော့်အကိုက အိမ်ပြောင်းတော့မှာဗျ။ ကိုဆူးဖို့ တစ်နေရာရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို မလိုင်တော့ ချက်မကျွေးနဲ့နော်။ စားဘူး။ ဟီး ဟီး